China Basswood Slats mveliso kunye nabenzi | Ingxilimbela
Izinto: I-Basswood slats
Ubukhulu: 25/35 / 50mm Ubude: 4.5ft ukuya kwi-8ft
Uhlobo: Isilayidi esime nkqo
Ubukhulu: 2.85 ± 0.05mm
Ukukhetha umbala: Imibala yokuprinta / imibala yokwenene yemithi / imibala yeAntique
Imibala eli-10 esemgangathweni kunye nemibala ehlengahlengisiweyo
Iimbonakalo: Iinkuni Natural, okungangenwa, Antibacterial, Flame nekudodobalisa
Unyango Surface: Ukwaleka kwe-eco-friendly / ukutyabeka okungasetyenziswanga emanzini
Ngokugxininisa kwimveliso yendalo kunye nohlaza, ukusetyenziswa kwemithi yendalo kuya kusiba ngakumbi nangakumbi. Ukunyangwa ngokwamachiza okanye ukomiswa kweenkuni kunokumelana nokugoba kunye nokonakala kwezinambuzane, kodwa unyango lweekhemikhali lunezinto ezininzi ezingalunganga. Ezi khemikhali zinokonakalisa okusingqongileyo, okanye zinokuzisa iingozi zempilo emzimbeni womntu, ezenza ukhuni lwendalo lube lukhetho olukhuselekileyo. Yonke imithi esiyisebenzisayo ihlolwe ukuqinisekisa ukuba akukho ziikhemikhali.
Into evikela amanzi
Iimveliso zethu zineqondo elithile lokumelana namanzi, kodwa kumanqanaba ahlukeneyo.
Ngeemfama zokwenyani zokwenyani, baye baphathwa nge-UV eco-friendly yokugquma okanye i-non-Voc-based based based coating to make a layer layer on the surface to prevent a amount of humidity, ke ngoko ukufaka iimfama zokwenene zemithi kwiindawo ezinjengegumbi lokuhlambela, Ikhitshi, okanye igumbi lokuhlamba iimpahla alikhuthazwa. Ukubonakaliswa kwexesha elide kumswakama kubangela ukhuni lokwenene kwi-warp okanye iphele. Kodwa igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala zibenza babe lolona khetho lufanelekileyo.
Ngokungafaniyo nemfama yeplanga, i-faux blinds ayi-100% ayinamanzi. Ke ngoko, azizukuphotha okanye zitshabalale kwindawo ezinomswakama, ke zilunge kakhulu kwiindawo ezinomswakama ezinje ngezindlu zangasese, iikhitshi, izindlu zangasese kunye namagumbi okuhlamba.
Ukwaleka okungasekelwanga emanzini
Iimfama zethu zomthi zonke ziphathwe ngokutyabeka okusekwe emanzini.
Ukutyabeka okusekwe emanzini ngeendlela ezininzi kuyalingana, okanye kungaphezulu kwendlela yabo esekwe ngeoyile. Umgangatho ophezulu wokutyabeka okusekwe emanzini okuhlala ixesha elide, ukukhawuleza kwexesha elomileyo, kunye nokukhupha ivumba elincinci.
Olu luhlu lulandelayo luluhlu lwezibonelelo zokusebenzisa ukutyabeka okusekwe emanzini kwizicelo zokuhlala:
Umxholo wezinto eziphilayo ezisezantsi (VOC), ukhokelela kwimpembelelo encinci kwindalo esingqongileyo nasemzimbeni.
Ivumba eliphantsi. Uncedo oluphambili xa upeyinta ngaphakathi okanye indawo ezingenamoya ungako.
Amaxesha awomileyo ngokukhawuleza okuququzelela ukusetyenziswa kwengubo yesibini.
Umngcipheko omncinci okanye ongenawo umlilo ekuphatheni i-solvents ezinokutsha.
Ukucoca okulula nokukhuselekileyo.
Ukulahlwa okuyingozi kancinci.
Ngokumalunga neempawu zokulwa neentsholongwane, imveliso yethu iluphumelele uvavanyo lwe-SGS.
Sinokubonelela nge-flame-retardant slats venetian slats, I-flame retardant solvents esiyisebenzisayo isekelwe emanzini, isisombululo esicacileyo esicwilisa emithini ukushiya ukubonakala kwemithi ngokungatshintshiyo. Kwaye baluphumelela uvavanyo.
Ukuzibophelela okukhulu 1.good kunye nomgangatho ozinzileyo
Umbala 2.Rich kunye elicwangcisiweyo
Umhla wokuhambisa okhawulezayo
5.Ukusebenza okuphezulu kunye nomgangatho ophezulu
Egqithileyo I-Bamboo Slats
Okulandelayo: Iinkuni ze-antique iimfama ze-slats-paulownia
I-Slat Wooden Blinds ezinkulu
I-White Wooden Slat Blinds
I-Wide Slat Blind Blinds
I-Wood Slat Blinds